Maxaa kala socotaa qiimaha uu ka leeyahay dalkaani Iswiidhan keek-ga loo yaqaano “Kanelbulle”? - iftineducation.com
Maxaa kala socotaa qiimaha uu ka leeyahay dalkaani Iswiidhan keek-ga loo yaqaano “Kanelbulle”?
iftineducation.com – Keek-ga qorfaha ka sameeysan ama la yiraahdo Kanelbulle ayaa waxaa uu ka mid yahay mac macaanada dalkaan caanka ku yahay ee la cunayey tan iyo sanadkii 1920-kii.
Waxyaabaha dha-dhanka leh ee laga dha-dhansan karro ayaa waxaa ka mid ah qorfaha, ka sokoow in bur, ukun, heyl qamiir iyo sugab asal ahaantiisa ka kooban yahay.
Hadana saas oo ay tahayna sanad kasta marka la gaaro bisha oktoobar afarteeda ayaa guud ahaan dalka oo dhami waxaa laga xusaa maalintaas loo asteeyey in la cunno.
Goobaha mac macaanka lugu iibiyo iyo dukaamadda cuntada ayaad ku arkeeysa Kanelbulle-ha oo si gaar ah meel u saaran iyo sicir loogu talagalay oo indhaha dadka soo jiidanaya. Sidoo kale carruuraha ayaa waxaa ay ku cabaan caano ama casiirka noocyadiisa kala duwan,halka dadka waa weeyni ay ku cabaan kafee ama shaah.
Urrurka cajiinleeyda dalkaan ayaa sheegay in sanadkii 199-kii ay bilaabeen dar dargelinta sameeynta mac macaankaasi ka sameeysan qorfaha ee afka iswiidhish-ka lugu yiraahdo Kanelbulle.
Aqriso :Qaabka Cusub Galmada Oo Ay Haweenka Kacsi Dartiis Hawada ...
Ugu dambeyntiina waxaan fileyaa in akhristaayaasheena soomaaliyeed ay fahmi doonaan macnaha uu keek-ga Kanelbulle loo yaqaano ugu fadhiyo dadka reer Iswiidhan iyo maalinta u gaarka ah uu leeyahay, waloow ay sidaas oo kale ay jiraan mac-macaano kale oo iyagana maalmo loo asteeyey.
W/D: Ikraam Cali-kaar
Noorweey oo sharcigii kala noqotay ajaanib ay soomaalidu ka mid tahay